कमरेड गोन्जालोको निधनमा शोक सन्देश जारी गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीले भन्यो- 'क.गोन्जालोको योजनाबद्ध हत्या', हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त - MOOLBATO.COM
कमरेड गोन्जालोको निधनमा शोक सन्देश जारी गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीले भन्यो- ‘क.गोन्जालोको योजनाबद्ध हत्या’, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त
२०७८ भाद्र २७ १७:१६
पेरु कम्युनिस्ट पार्टी साइनिङ पाथका अध्यक्ष डाक्टर अविमायल गुजमान (क. गोन्जालो) को निधनमा शोक सन्देश जारी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले विश्वभरिबाट उहाँको निधन नभएर योजनाबद्ध हत्या भएको हो भनेर आवाज उठिरहेको जनाएको छ । पार्टी महासचिव मोहन वैद्य किरणले जारी गर्नुभएको शोक सन्देशमा विश्वभरिका क्रान्तिकारी पार्टी तथा मानवाधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरुले उहाँको जीवन रक्षा र शिघ्र रिहाइका लागि गम्भीर आवाज उठाउँदा पनि उहाँको उपचार र जीवन रक्षाप्रति पेरुको प्रतिक्रियावादी सरकार कहिल्यै सम्वेदनशील नरहेको र त्यहाँको सरकारले सैन्य अस्पतालमा निधन भएको भने पनि यो उहाँको योजनाबद्ध हत्या भएको दाबी गरिएको छ ।
शोक सन्देशमा भनिएको छ, “क. गोन्जालोले १९६०को दशकमा पेरुमा कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन प्रक्रिया सुरु गर्नु भयो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गदर्शनमा साइनिङ् पाथले १९८० देखि पेरुमा दीर्घकालीन जनयुद्धको थालनी ग¥यो । करिब बाह्र वर्षको अवधिपछि प्रत्याक्रमणको योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा उहाँलाई लिमाबाट गिरफ्तार गरियो । त्यसपछि उहाँले निरन्तर २९ वर्षसम्म दुश्मनको कालकोठरीमा सङ्घर्ष गर्नु भयो । पेरुको क्रान्तिले नेपालमा जनयुद्धको थालनीका लागि महत्वपूर्ण वैचारिक भूमिका खेलेको कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौ । कसैले मान या नमान पेरुमा लालझण्डा फहराइरहेको छ भनी महान् सहिद क. रामवृक्ष यादवले त्यतिबेला लेखेको गीत अहिले पनि जो कोही क्रान्तिकारीको कानमा गुञ्जिरहन्छ ।”
वक्तव्यमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ, “क. गोन्जालो आस्था एवम् विश्वासको प्रतीक र दुश्मनका सामु कहिल्यै नझुक्ने क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर क्षति पुगेको छ । यस दुःखद घडीमा हाम्रो पार्टी क. गोन्जालोप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र साथै पेरु कम्युनिस्ट पार्टी तथा त्यहाँका क्रान्तिकारी जनताप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।”
शोक सन्देशको सुरुमै भनिएको छ, “पेरुको एउटा सानो शहर मोलेण्डोमा डिसेम्बर ३, १९३४ मा जन्मिनु भएका पेरु कम्युनिस्ट पार्टी (साइनिङ् पाथ) का नेता डाक्टर अविमायल गुजमान (क. गोन्जालो) को पेरुको कलाओ स्थित जलसेनाको अड्डामा हिजो सेप्टेम्बर ११ का दिन निधन भएको छ । सेप्टेम्बर १२, १९९२ मा लिमाबाट गिरफ्तार हुनुभएका क. गोन्जालोलाई आजीवन कारावासको सजाय दिएर अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली फुजीमोरी सरकारले कालकोठरीमा बन्दी बनाएको थियो । पछिल्लो समयमा उहाँ छालाको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । विश्वभरिका क्रान्तिकारी पार्टी तथा मानवाधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरुले गम्भीर आवाज उठाउँदा पनि उहाँको उपचार र जीवन रक्षाप्रति पेरुको प्रतिक्रियावादी सरकार कहिल्यै सम्वेदनशील रहेन । त्यहाँको सरकारले सैन्य अस्पतालमा निधन भएको भने पनि यो उहाँको योजनाबद्ध हत्या हो भनेर यतिबेला विश्वभरि आवाज उठेको छ ।”